दाँतले नङ टोक्ने गर्नुहुन्छ, कतै मानसिक विकारको लक्षण त हैन ? - E Net Nepal
Home Health Tips दाँतले नङ टोक्ने गर्नुहुन्छ, कतै मानसिक विकारको लक्षण त हैन ?
दाँतले नङ टोक्ने गर्नुहुन्छ, कतै मानसिक विकारको लक्षण त हैन ?
दाँतले नङ टोक्नु भनेको आफुले आफैलाई फोहोरी देखाउनु हो, जुन सबैलाई थाहा भइरहेकै हुन्छ । तर बानि परिसकेपछि छुटाउन गाह्रो हुन्छ । दाँतले नङ टोक्दा स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर गर्छ, जुन कुरा पनि तपाई हामीलाई थाह छदै छ ।
तर अमेरिकन साइक्याट्रिक एसोसियसनले भने यसमा नया कुरा पत्ता लगाएको छ । बिशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार नङ टोक्ने बानिलाई खतर्नाक मानसिक विकारको रुपमा बर्गीकरण गर्न सकिन्छ । डेली मेलका अनुसार दुनियाँमा लाखौं मानिसहरु यस्तो प्रकारको नराम्रो लतबाट पिडित छन् । बिशेषज्ञहरुको कुरा मान्ने हो भने नङ टोक्ने बनि हटाउन धुमपान छोड्न भन्दा पनि कयौ गुणा मुश्किल हुन्छ । यद्यपि यसको असरलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन तर यस्को असर खतरनाक हुन्छ ।
बारम्बार नङ टोक्ने बनिको कुनै कारण हुँदैन तर बेकारको कुरा सोच्ने, कल्पनामै रमाउने/डराउने, खाली पिर गरिराख्ने बानि नै यसको मुख्य कारण हो ।